अमिताभ बच्चनको नाम पनि एउटा अनौठो रेकर्डका कारण गिनिज बुकमा दर्ता – Etajakhabar
सोमबार, साउन ०७, २०७५ | Monday, Jul 23, 2018
अमिताभ बच्चनको नाम पनि एउटा अनौठो रेकर्डका कारण गिनिज बुकमा दर्ता
एजेन्सी – बलिउडमा हरेक शुक्रबार केही न केही रेकर्ड बन्ने गरेको छ । कुनै फिल्मले व्यावसायिक रेकर्ड तोड्छन् भने कुनैले असफलताको रेकर्ड राख्छन् । फिल्मसँगै त्यसमा संलग्न कलाकार, निर्देशक, प्राविधिकको पनि रेकर्ड बन्दै र टुट्दै जान्छ । भारतीय अनलाइनले विभिन्न समयमा विभिन्न शीर्षकका गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकड्र्समा नाम दर्ता भएका बलिउड स्टारबारे रिपोर्ट तयार गरेको छ :
आशा भोस्ले गायिका आशा भोस्लेले ११ हजारभन्दा बढी एकल गीत गाएकी छिन् । सन् २०११ मा उनको नाम सर्वाधिक गीत गाउने भारतीय गायिकाका रूपमा गिनिज बुकमा लेखिएको हो । आशाले हिन्दी, नेपाली, मराठीलगायत विभिन्न २० भाषामा गीत गाएकी छिन् ।
अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चनको नाम पनि एउटा अनौठो रेकर्डका कारण गिनिज बुकमा दर्ता भएको छ । अभिताभले १९ जना फरक–फरक गायकका साथ हनुमान चालिसा गाइसकेका छन् । सोही आधारमा उनको नाम रेकर्ड भएको हो ।
शाहरुख खान किङ खानको नाम पनि गिनिज बुकमा दर्ता भएको छ । उनको चाहिँ सन् २०१३ को सर्वाधिक कमाइ गर्ने बलिउड हिरोको रूपमा गिनिज बुकमा नाम रेकर्ड भएको हो । शाहरुखले सो वर्ष २२०.५ करोड भारु कमाइ गरेका थिए ।
कुमार सानु बलिउड पाश्र्वगायक कुमार सानुको नाम पनि गिनिज बुकमा दर्ता छ । एकै दिनमा सर्वाधिक गीत गाएर उनले रेकर्ड राखेका हुन् । यो सन् १९९३ को कुरा हो, सानुले एकै दिन २८ वटा गीत रेकर्ड गराए । त्यही कुरा गिनिज बुकमा रेकर्ड भएको हो ।
समीर अन्जान गीतकार समीर अञ्जानको नाम पनि गिनिज बुकमा लेखिएको छ । ‘साजन’, ‘राज’जस्ता फिल्मका गीतकार समीरले अहिलेसम्म ३५ हजारभन्दा बढी गीत लेखिसकेका छन् । सर्वाधिक गीत रचनाकारका रूपमा उनको नाम लेखिएको हो ।
ललिता पवार अभिनेत्री ललिता पवारको नाम सबैभन्दा लामो समयसम्म फिल्म अभिनय गरेकी अभिनेत्रीका रूपमा दर्ता छ । उनले ७० वर्षसम्म अभिनय गरिरहिन् । सो अवधिमा उनले सात सयभन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन् ।
क्याट्रिना कैफ अभिनेत्री क्याट्रिना कैफको नाम पनि गिनिज बुकमा लेखिएको छ । उनको नाम सन् २०१३ की सर्वाधिक पैसा कमाउने भारतीय अभिनेत्रीका रूपमा गिनिज बुकमा नाम रेकर्ड भएको हो । क्याट्रिनाले त्यो वर्ष ६३.७५ करोड भारु कमाएकी थिइन् । त्यही कुरा गिनिज बुकमा लेखिएको हो ।
सोनाक्षी सिन्हा अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाको नाम पनि गिनिज बुकमा रेकर्ड भएको छ । उनले यो उपलब्धि सन् २०१६ मा पाएकी हुन् । उनले एकै समयमा धेरै महिलाका साथ नेट पेन्ट गरेर रेकर्ड राखेकी हुन् । गत वर्ष विश्व महिला दिवसका दिन मुम्बईमा एउटा कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । त्यहाँ सोनाक्षी र उनकी आमा पुनम सिंहले पनि भाग लिएकी थिए । त्यो कार्यक्रममा १३ सय २८ महिलाले एकसाथ नेल पेन्ट गराएका थिए । त्यसको हिस्सा सोनाक्षीलाई पनि मिल्यो । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
अभिषेक बच्चन अभिषेकको नाम पनि गिनिज बुकमा रेकर्ड भएको छ । १२ घण्टामा सबैभन्दा धेरैपटक सर्वसाधरणमाझ देखिएको सेलेब्रिटीका रूपमा उनको नाम लेखिएको हो । अभिषेक सन् २००९ मा रिलिज भएको ‘दिल्ली ६’ नामक फिल्मको प्रमोसनका क्रममा १२ घण्टा लगातार सातवटा सहरका पब्लिकमाझ पुगेका थिए । त्यतिवेला उनी गाजियाबाद, नोएडा, फरिदाबाद, दिल्ली, गुडगाउँ, चन्डीगढ र मुम्बई पुगेर पब्लिकसँग साक्षात्कार गरेका थिए । त्यो कामका लागि उनले त्यतिवेला आफ्नो निजी जेट विमान र कारबाट झन्डै १८ सय किलोमिटरको दूरी पार गरेका थिए । यो मामलामा अभिषेकले हलिउड स्टार बिल स्मिथलाई पनि जितेका थिए । सन् २००४ मा आफ्नो फिल्म ‘आइ रोबर्ट’को प्रमोसनका क्रममा बिल दुई घण्टामा तीन स्थानका दर्शकमाझ पुगेका थिए ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक ०९, २०७४ समय: १०:०४:३५
बलिउडका यी चर्चित फिल्मी स्टार जसलाई श्रीमतीले यति ठुलो गल्ति गर्दा पनि माफ गरिन्
टंक बुढाथोकीले अशोक दर्जीको प्रतिभाको कदर कि श्रम शोषण  गरे ? चर्चित कलाकारनै टंक बुढाथोकीको बिरुद्दमा उत्रिए
बलिउडका स्टार नसीरुद्दीन शाहले आफु भन्दा १६ बर्ष जेठी श्रीमती बिहे गरेका थिए
बलिउडकाे प्रतिष्ठित ‘जी सिने अवार्ड’ याे वर्ष नेपालमा हुने, नेपाली फिल्मका लागि पनि अवार्डको व्यवस्था हुने
गायिका इन्दिरा जोशीको ‘नसाको म मातमा परी’ भन्ने गीतमा नायिका प्रियका कार्कीले दिईन अहिले सम्मकै बोल्ड सीन !
सबैका प्यारा अशोक दर्जीलाई बिराटनगर एरपोर्टमा भयो यस्तो भब्य स्वागत(भिडियो सहित)
चर्चित हस्पताल साहु मुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ पुर्जी : थुतुनो नियन्त्रण महाशाखामा हाजिर हुन आदेश…
क्यान्सरपिडित इरफान खानको बाच्ने सम्भावना कति ? इरफानले मिडियालाई दिए यस्तो दुखद जानकारी(भिडियो सहित)
अशोक दर्जीलाई हातमा लिएर टंक बुढाथोकीले पैसा कमाउन प्लान बनाए भन्ने समाचारको फोनवार्ताको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रिन्सिपल दिपक न्यौपाने आक्रोश हुँदै आए मिडियामा
सडकबाट पूर्व प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीले भनिन् : ७ पढेको, ८ पढेको, १० पढेको व्यक्तिलाई के भनौं र खै ?
भारतकी चर्चित अभिनेत्री प्रियंकाले गरिन एकाएक झुन्डिएर आत्महत्या,पारिवारिक कारणले आत्महत्या गरेको अनुमान
१२ बर्षमा बलात्कारमा परि १३ बर्षमा बच्चा जन्माएकी रविनालाई दोस्रोपटक बिहे गरेको श्रीमानले पनि बच्चा जन्माएपछी आमा छोरालाई पशुपति आर्यघाटमा छोडेर फरार भए (भिडियोसहित)
मृत्यु भएको १० दिनपछि महिलाले जन्माइन् बच्चा : जव दुई खुट्टाको बीचमा मृत्यु भइसकेको बच्चा देखे
अशोक दर्जीलाई प्रयोग गरि पैसा कमाउन यसरी टंक र उनको दाईले बनाएको मास्टर प्लान(दर्जीको हेड मास्टर संग गरिएको फोन रेकर्डनै बाहिरियो)
विश्वकपको फाइनल खेलमा मैदानमा छिर्ने यी महिलालाई दिइयो यस्तो सजायँ
चितवनमा दुईवटा बस एकापसमा ठक्कर खाँदा २३ जना घाइते
३१ सेकेन्ड अगाडि
एक महिनादेखि थुप्रिएको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर उठ्न थाल्यो
आफ्नो भान्सेको तलव आँफै राख्दै न्यायधिस
चौतर्फी घेराबन्दीमा सरकार
देउवाको आक्रोस: केसीको माग जायज छ, पञ्चायत र राणासँग डलेको जस्तै अब कम्युनिस्टसँग लड्छौँ
प्रधानमन्त्री ओलीले डा केसीसँग सीधै वार्ता गर्ने
साउनमा युवतीमा मेहन्दी र हरियो चुरा लगाउने ‘क्रेज’
सुन तस्करीः अनुसन्धान रोकियो तर तस्करी रोकिएन